Ukuqondiswa kwamakhasimende-Izindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Kuyisikhathi Sokuthumela futhi
Umsebenzi ubaluleke kakhulu kune-Mountain Tai
Imibuzo ngosayizi wento edingekayo yisivakashi
Isikhathi: 2021-04-22 Amazwana: 21
Ukuqondiswa kwamakhasimende kube ngumqondo webhizinisi le-COFF peple, okusiza i-COFF ukuthi iwine amaklayenti aqotho ngokwengeziwe. Ekupheleni kuka-2020, elinye lamakhasimende ase-COFF aseYurophu lacela isethi ye-Canning & Filling Machine. Ikhasimende lithole izingcaphuno ezimbalwa ezivela kubenzi bamaChina.
Kodwa-ke, ekugcineni ikhasimende linqume ukufaka i-oda ku-COFF yize lazi ukuthi i-COFF akuyona inkampani eqondile. Ngesikhathi kwenziwa inkontileka, i-COFF yanikeza unjiniyela wabo amahlandla amaningi kumenzi wezinkampani ukuze axhumane nomthengisi ngemininingwane yokuhweba neyezobuchwepheshe, kufaka phakathi uphawu nezidingo zazo zonke izingxenye ezibalulekile nezinto zikagesi.
Ngaphezu kwalokho, enkingeni eyinhloko yokuqukethwe komoya-mpilo ngesikhathi sokugcwaliswa lapho ikhasimende likhathazeka kakhulu khona, i-COFF ingeza enye into eyodwa ngezindleko zayo ukwenza ukuthi ikhasimende lithole umkhiqizo ongcono ngemali ephansi. Ngaphezu kokusebenza kwe-oda, i-COFF izothumela unjiniyela okungenani kanye ngesonto ukuze ihlolwe futhi ihlolwe ishejuli yokukhiqiza nekhwalithi.
Ukuthenjwa kwamakhasimende kuye kwaziswa kakhulu ngabantu be-COFF!
Ngeminye imininingwane, xhumana no-pls Jessie@nbcoff.com
Previous: Kuyisikhathi Sokuthumela futhi
Okulandelayo: Umsebenzi ubaluleke kakhulu kune-Mountain Tai
Yi-Shipping Seaso ...
Isibopho sisisindo ...